ယောဘသည်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကို | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ, သငျသညျအများအပြားအလုပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုမေးမွနျးရလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကအကြောင်းမေးပါလိမ့်မည်. တိုင်းအင်တာဗျူးကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးအလုပ်ရှင်များကိုမေးမေးခှနျးအခြို့ရှိပါတယ်. အသုံးအများဆုံးအလုပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအလေ့အကျင့်. အလေ့အကျင့်ကိုသင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုကူညီပေးပါမည်!
ဒီမှာပါ5အများအပြားအလုပ်ရှင်များသင်မေးပါလိမ့်မယ်မေးခွန်းများ:
ဒါဟာသင်တိုင်းအင်တာဗျူးမှာဟုမေးရလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. အတိုချုပ်သင်ခဲ့ပြီအလုပ်အကိုင်များကိုဖော်ပြရန်နှင့်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြောဆို. သငျသညျကျောင်းကိုသှားလြှငျ, သငျသညျကိုလေ့လာသောအရာကိုအကြောင်းပြောဆို. ရှည်လျားလွန်းဘို့စကားပြောမနေပါနဲ့, သငျတို့သ feeling သို့မဟုတ်ယခုလုပ်နေတာကြောင်းအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတက်ပြီးစီး. ဥပမာ, သင်ဒီအလုပ်လျှောက်ထားခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ပြောနိုင်.
သင်သည်ဤမေးခွန်းကိုမေးသောအခါ, သင်သိအပြုသဘောအမှုအရာအကြောင်းပြောဆို. သင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုကြိုက်တယ်ဘယ်သို့ဆို. အလုပ်ရှင်ရဲ့ website ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဤမေးခွန်းကိုအဘို့ပြင်ဆင်ပါ. ကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်. Read သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုစီမံကိန်းများကို. ကုမ္ပဏီ၏ website တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, အသုံး မှန်တံခါး သို့မဟုတ် ကို Yelp. သူတို့ကအခြားလူကုမ္ပဏီစဉ်းစားအဘယ်အရာကိုသင်ပြောပြစေခြင်းငှါ.
သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးခြင်းမပြုမီ, အလုပ်ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါ. ရှေးခယျြ3သို့5အလုပ်အဘို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းသင်ရှိသည်ကျွမ်းကျင်မှု. သူတို့အားကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းပြောဆို. သူတို့အဖွဲ့အစည်းကကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမည်မှာ. ဥပမာ, ဆရာရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ဖို့လျှောက်ထားသူတစ်ဦးဦးဟုပြောစေခြင်းငှါ,, "ကျွန်မထက်ပိုရှိသည် 8 daycares မှာအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများအတွက်ကလေးတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နှစ်ပေါင်း. ငါအတှေ့အကွုံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖန်တီးခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာကနေလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြပါပြီ. ငါသည်သင်တို့၏ကျောင်းသို့လာသောမိသားစုများအများအပြားစပိန်စကားမပြောတတ်ကြောင်းသတိပြုမိ. စပိန်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်ဘာသာပြန်ဆိုကူညီနိုင်ဘူး။ "
သင်တစ်ဦးအားနည်းခြင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလို့ပြောမနေပါနဲ့. fixed နိုင်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ. သင်သည်သင်၏အားနည်းချက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုအကြောင်းပြောဆို. ဒါဟာရှိပါတယ်လျှင် - ကပိုကောင်းလာတာတော့ထားပြီးဘယ်လိုရှင်းပြပါ. ဘုံအားနည်းခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုအများပြည်သူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်. သင်အများပြည်သူစကားပြောအတွက်အတန်းယူကြပြီနှငျ့သငျ့နောက်ဆုံးအလုပ်မှာအများကြီးကျင့်သုံးခဲ့ကြလို့ပြောနိုင်. အများပြည်သူအတွက်စကားပြောတဲ့အခါသင်ယခုပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားရဟုခြင်းဖြင့်အဆုံး, သို့မဟုတ်သင်နေဆဲပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြကြောင်း.
သင်ကိုယ်တိုင်အဘယ်မှာအတွက်ကြည့်ရှုကြပါ5အနှစ်?
သငျသညျဖို့အရေးအပါဆုံးအရာအလုပ်ရကောင်းသောအမှုကိုပြုမှကြောင်းကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ. သင်သည်သင်၏အနေအထားကိုအထက်ပါအလုပ်ကဘာလဲဆိုတာသိကြပါလျှင်, ကဖော်ပြထားခြင်း. သငျသညျမယျဆိုရငျ, သင် ပို. ပင်ကုမ္ပဏီ၏ကူညီနိုငျတဲ့အဆင့်မြင့်အလုပ်အတွက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်သည်ဟုဆို. သင်အသုံးပြုလိုဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်မှုဖော်ပြထားခြင်း.
အားလုံးအလုပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းလိုက်တဲ့အခါ, အတွက်ဖြေဆိုဖို့ကြိုးစား2မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း. အင်တာဗျူးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုနားထောငျဖို့လိုသည်ဆိုပါက, သူတို့နောက်ကိုလိုက်-up, မေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်.
တခါတလေ, တစ်ဦးအလုပ်ရှင်ကသူတို့ကိုသင်တစ်ဦးခက်ခဲအခြေအနေမှာပြုမူပုံကိုအကြောင်းပုံပြင်ကိုပြောပြရန်သင့်အားမေးပမေ. သူတို့ကသင်နှင့်သင်သောအရာတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုလူတစ်ဦး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ.
အမူအကျင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းလိုက်တဲ့အခါ, အဆိုပါပြဿနာလှုပ်ရှားမှုရလဒ်ကိုသုံးပါ (BY) ပုံစံ.
1. ပြဿနာ: အသေးစိတ်အတွက်အခြေအနေနှင့်ပြဿနာဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်သင့်အဖြေ Start. အလုပ်အခြေအနေနှင့်လူများကိုဖော်ပြပါ. ဥပမာ, ငါ Cocina Michoacana မှာမန်နေဂျာတုန်းကသင် "ဟုပြောစေခြင်းငှါ,, ငါငါးစားပွဲထိုးများနှင့်စားပွဲထိုးစီမံခန့်ခွဲ. အဆိုပါစားပွဲထိုးတစ်ခုမှာမကြာခဏအချိန်ပေါ်အလုပ်လုပ်မှတက်မပြလိမ့်မယ်။ "
2. လှုပ်ရှားမှု: သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပါ. သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ,, "ကျွန်မအချိန်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လာမယ့်အကြောင်းကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်စားပွဲထိုးမှပြောဆိုသော. သူကသူ့မိခင်ကအရမ်းနာကြောင်းကိုပြောတယ်. သူဟာနံနက်ယံ၌စောစောပိုင်းတွင်စတင်ရန်နိုင်သူတစ်ဦးစောင့်ရှောက်သူများကိုရှာဖွေမတတျနိုငျ. တခါတလေ, သူကသူမကောင်းကောင်းခံစားမခံခဲ့ရလျှင်အိမ်မှာနေဖို့ခဲ့ရတယ်။ "
3. ရလဒ်: အောင်မြင်စွာရလဒ်အကြောင်းပြောဆိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်သင်ယူ. A ကောင်းဆုံးဇာတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်, "ငါသည်အကြာတွင်သောနေ့၌ရန်စားပွဲထိုးရဲ့ဆိုင်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ဒါကြောင့်သူတို့ကကူညီနိုင်အောင်အခြို့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြောပြရန်အဆင်ပြေခဲ့လျှင်ငါမေးသော်. သူကဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုသည်. သူတို့ကအရေးပေါ်ရှိခဲ့ပါလျှင်မိမိအပြောင်းကုန်ပြီကိုဖုံးလွှမ်းရန်သဘောတူခဲ့သည်။ "
သင့်ရဲ့ proudest အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ?
သငျသညျအလုပျမှာဖိအားတွေအများကြီးအောက်မှာ ရှိ. လာသောအခါအချိန်ကိုဖော်ပြရန်.
သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေးခွန်းများမေးရန်ခွင့်မပြုပါ. ဒါဟာသင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး status ကိုလည်းပါဝင်သည်, မည်မျှကလေးများသင်ရှိသည်, နှင့်သင့်အသက်အရွယ်. တစ်စုံတစ်ဦးကသင်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတယ် အကယ်. ဖြေဆိုရန်မလိုချင်ကြဘူး, သငျသညျဆိုသညျကားယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောနိုင်ပါသည်, "ငါသည်ထိုမေးခွန်းကိုမဖြေဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။ "
ယောဘသည်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုလူတိုင်းဦးနှောက်အာရုံကြောအောင်. အကောင်းဆုံးအရာသည်သင်၏အဖြေကိုသတိရနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်! သင်လုပ်နိုင်လျှင်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူအလေ့အကျင့်.